I Steatite Grinding Burr China Manufacturers & Suppliers & Factory
I Steatite Grinding Burr - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 23 ye-I Steatite Grinding Burr)
I-Steatite Ceramic Grinding Burr elahlekile ye-Pepper Mill
I-Steatite Ceramic Grinding Burr elahlekile ye-Pepper Mill Imininingwane: 1. Faka umbala: Imibala emhlophe ejwayelekile futhi eyenziwe ngokwezifiso, grey etholakalayo 2. Izinto ezihlaza okotshani: 85% alumina, 95% alumina ne-steatite ngokuzithandela 3. Izindlela zokubumba: ukucindezela okushisayo ngokubumba ngesandla...
I-standard Design Al2o3 Ceramic Burr ye-Pepper Grinder I-Pepper grinder ceramic burr ijwayele ukwenziwa ama-aluminium oxides ayi-96% okuyiyo ebiza kakhulu, i-eco-friendly futhi igqoka impahla eluhlaza. Kuqashelwe njengento efanelekile yokukhiqiza i-ceramic burr ngezinhlobonhlobo eziningi ezisezingeni eliphakeme...
Gqoka i-coffee hand grinder ye-alumina ceramic burr eqinile
Isici esivelele kunazo zonke se-alumina ceramic grinding burr ukugqokwa kokugqokwa, sinesikhathi sokuphila kwenkonzo ende ukwedlula esensimbi. Njengamanje, ukusetshenziswa okuthandwa kakhulu kwe-alumina ceramic grinding burr esandleni nomenzi wekhofi kagesi, ikhofi yekhofi, i-coffee grinder. Ukuze kuhlangatshezwane...
Isandla sekhofi sesandla se-eco-friendly alumina conical burr
I-Alumina conical burr iyingxenye ebalulekile ye-varity yesandla sekhofi yekhofi, umenzi wekhofi, ikhofi yekhofi. Njengokungagugi kokugqoka kwayo okuphezulu, ukusebenza kahle okuxakile, ubulukhuni obuphakeme nokuqina kwezindawo, futhi i-eco-Friend futhi isebenza kahle kakhulu. Ukucabanga inketho enhle ku-grinder...
I-brown coffee bean al2o3 burr yokugaya ka-ceramic
Idizayini ejwayelekile eyenziwe ngobumba ye-ceramic burr ngombala okhethekile, yenziwe ngo-95% we-aluminium oxide ceramics okuyi-eco-friendly material yempilo yomuntu. Siyakwazi ukuhlinzeka ngokukhethwa kombala ohlukile ukufeza izidingo zamakhasimende, njengombala omhlophe, umbala wekhofi nombala omnyama. Ukuze...
UBrown alumina ikhofi umenzi we-ceramic burr wokugaya
Lokhu okwenziwe ngokwezifiso kwe-alumina coffee maker ka-ceramic grinding kwenziwa nge-95% aluminium oxide ceramics, sikwazi ukukunikeza imibala eminingi, s uch njenge mhlophe, emnyama, nsundu, grey kanye nophondo lwendlovu. Ukuze kuhlangatshezwane nalesi sidingo semakethe, sihlala silungiselela isitoko esanele...
I-FDA igunyaze i-oice spice mill e-alumina ceramic burr
Oily spice mill alumina ceramic burr Le alumina ceramic burr esetshenziselwa i-varity of oice spice grinder, izinongo zesinongo, i-pepper mill / grinder, enokumelana okuhle kokugqwala, izinga lokushisa eliphakeme lokusebenza, izici ezinhle zemishini, ukumelana okuphezulu, ubunzima obukhulu, ukumelana okukhulu...
Ukufakwa imvamisa ephezulu C220 indishi ye-ceramic e-steatite
Izinduku ze-Steatite ceramic 1. Izinduku ze-Steatite ceramic zisebenza kahle kakhulu kwizicelo zokubanda ezibandayo noma eziphezulu. 2. I-Steatite isetshenziselwa ukuxhasa izinto ezifudumeza ku-heater kagesi, amakhemikhali, kuhhavini. 3. I-Steatite iyisidlali esihle kakhulu se-voltage. Ibamba ngaphansi...
I-coffee bean conical burr efakwe ngokwezifiso zekhofi
Ukuze uhlangabezane nemfuneko ethile ekhethekile evela kumkhiqizi womshini wekhofi, kukhona umbala okhethekile we-ceramic ukugaya i-conical burr edingekayo, njengegrey, ensundu, emnyama nokunye. Le-alumina ceramic conical burr eyenziwe ngokwezifiso eyenziwe ngamapulangwe angama-95% aluminium oxide, ayakwazi...
I-FDA isitifiketi esenziwe nge-alumina conical grinding burr
I-Alumina conical grinding burr yenziwe ngama-aluminum e-aluminium angu-95%, i- e eyakwazi ukuhlinzeka ngemibala eminingi, i-s uch njengemhlophe, emnyama, emnyama, emhlophe nangendlovu. Ukuze sihlangabezane nalezi zimfuno ezimakethe, sihlale silungiselela isamba esanele sokufinyelela izidingo zamakhasimende ethu...
Pepper crusher grinder burr ceramic
Pepper crusher grinder burr ceramic Le-alumina buram ceramic esetshenziswe ezinhlobonhlobo ze-spice grinder, i-spice mill, i-pepper kill / grinder, enokumelana nokushisa okuphezulu, ukushisa okuphezulu okusebenzayo, izici ezinhle zokugqoka, ukumelana nokugqoka okukhulu, ukuqina okukhulu ukushisa okukhulu. Ukucaciswa:...
I-Steatite I-Ceramic Pin ye-Thermostat Yokushisa Okushisa
I-steatite pin ye-ceramic ye-bimetallic thermostate yenziwe nge-C221 noma i-C220 steatite ngenxa yezici zayo ezinhle Sinikeza inqwaba ye-statite ceramic pin insulating standard, uma uzimisele ukusihlinzeka ngomdwebo wezobuchwepheshe, sizokuthumelela izinto ezithile ozikhethelayo ngokukhetha kwakho. Sinekhono elikhulu...
Ukufaka isihlahla se-steatite ceramic ngesihlahla seThermostat
Yenziwe nge-steatite C220. Ngenxa yamakhemikhali ayo asebenza kahle futhi kagesi, Ukusetshenziswa okujwayelekile kakhulu ku-thermostat ye-bimetal. Sinikeza inamba ejwayelekile ye-steatite yokuzivikela, uma uzimisele ukusihlinzeka ngomdwebo wezobuchwepheshe, sizokuthumela ezinye izinto ezijwayelekile ozikhethelayo...
I-standard conical coffee mill burr
I-Standard cerical ceramic burr yenziwe ngamapulangwe angama-95% aluminium oxidamenti okuyinto eco-friendly impahla enempilo yabantu. Siyakwazi ukuhlinzeka ngokukhethwa kombala ohlukile ukuhlangabezana nemfuneko yamakhasimende, njengombala omhlophe, umbala wekhofi nombala omnyama. Ukuze sihlangabezane nalezi zimfuno...
I-spice grinder burr eyenziwe ngokwezifiso
Ukugxila kwefektri yethu ekukhiqizeni ubukhulu be-spice ceramic grinder burr ngamaklayenti ngamakhasimende noma amasampuli. Sisekela uhlelo lwe-prototyping ngenani elincane kakhulu. Yonke into esisetshenziselwa i-spice grinder burr iyavumelana ne-FDA, i-LFGB imfuneko. Izici eziyinhloko ze-burr ceramic...
I-high frequency steatite tube ceramic
I-steatite tube ceramic I-steatite ceramic isebenza njengemfutho ephakeme, ukugxiliswa okuphezulu kwezinto ezibonakalayo ezinkampanini eziningi, zikagesi, zombane. I-steatite tube ye-ceramic inenzuzo enhle ezindleko, kodwa izinto ezibucayi kakhulu ekushiseni okushisayo, futhi kunzima kakhulu ukulawula ubukhulu...
I-Alumina yokugaya i-disc isenziwe nge-95% aluminium oxide yoceramics. Inezici zayo ezingavamile, ezifana nokugqoka ukumelana, ukubiza izindleko eziphumelelayo kanye ne-eco-friendly futhi ezisezingeni eliphansi lokuziphatha ngokufudumele, kuye kwamukelwe kabanzi yibo abakhiqizi abaningi bekhofi grinder, ngezinye...
Kuyi-standard design conical grinding burr yemishini yamakhofi kagesi. Sigcina ukuphepha okuningi kwalolu hlobo lwe-ceramic burr isikhathi eside ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ezivamile nezikhathi esifushane. Esikhathini esifanayo, senziwe ngama-95% alumina ceramics. Ngokuphathelene nokukhathazeka kwethu, le...
Sigxila ekwenzeni ukukhiqizwa kwekhofi grinder ceramic burr iminyaka eminingi. Njengamanje, siye sahlinzeka uchungechunge lwe-grinding burrs ejwayelekile noma ejwayelekile. Esikhathini esifanayo, senziwe ngama-95% alumina ceramics. Ngokuphathelene nokukhathazeka kwethu, le ndaba ine-high-abrasive, anti-corrision,...
I-0.5mm Tape Ekubunjweni kwe-99% i-Aluminium Oxide C subicates
3 ~ 30 "Izindlela Ezinde Zokusebenzisa I-Pepper Mill ze-Pepper Grinder
Amathuluzi aphezulu e-Seal Ceramic e-High-Pressure Mechanical
Ukucaca okumsulwa okuphezulu 95% al2o3 alumina ceramic rod
I Steatite Grinding Burr
I-Steatite Grinding Burr
I-Standard Ceramic Grinding Burr
I-Spice Grinder Burr
I-coffee Beangrinding Burr